Ny Fiarahana amin'ny aterineto sy ny Fifandraisana an-Tserasera Shinoa Mampiaraka
Ny Fiarahana amin’ny aterineto sy ny Fifandraisana an-Tserasera Shinoa Mampiaraka
Tsy mifandray na tsy mifandray amim-pahombiazana izany dia matetika ny antony mahatonga ny fifandraisana tsy, ny sasany aza vao manomboka. Amin’ny fiarahana amin’ny aterineto, ny fifandraisana mahomby dia zava-dehibe kokoa noho ny hany fifandraisana ny olona roa dia tsy maintsy ary izay izy ireo dia afaka manorina fifandraisana izay afaka ihany koa izy ireo hanaraka ny tena izao tontolo izao dia ny fifandraisana an-tserasera. Indrindra fa raha olona iray no ampiasaina kokoa sy mahazo aina izay maneho ny tenany amin ny fifandraisana ara-batana sy ny fihetsika, ny fifandraisana amin’ny alalan’ny teny mety ho sarotra sy mavesatra mihitsy aza. Fa raha mbola misy marina momba ny fihetseham-po, avy eo ny teny dia tokony ho tonga mora. Fifandraisana, na izany aza, dia roa-dalana eny an-dalana iray dia tsy maintsy tsy mahalala afa-tsy ny fomba hanehoany ny tenany tenany amin’ny fomba mahomby, fa koa hoe ahoana no fomba fihainoana. Mampihomehy moa, ny mahagaga ara-amin’ny fifandraisana ny teknolojia dia tsy nanao izany, na inona na inona mora kokoa ho an’ny olona mba hifandray tsara amin’ny tsirairay, indrindra fa izay fifandraisana no resahina.
Fiarahana tranonkala mamela ny olona rehetra manerana izao tontolo izao mba hihaona sy hampivelatra ny fifandraisana sy ny isan-karazany sy ny tena mety hafatra fitaovana azo jerena an-tserasera ho mifandray amin’izy samy izy toy ny mora toy ny manindry bokotra iray. Fa ny fifandraisana mbola tsy na dia eo aza ireo nanampy ara-teknolojia tombony. Ireo fandrosoana, mazava ho azy, afa-tsy hanome antsika amin’ny tsara sy mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any fitaovana mba hijanona mifandray nefa dia mbola miakatra ho antsika mba hanorina fifandraisana manokana amin’ny olona iray hafa amin’ny alalan’ny fifandraisana mahomby. Ireo miavaka fitaovana ireo bebe kokoa tahaka ny fanitarana ny rantsan-tanana sy ny feo chords mbola tsy maintsy mampiasa ny lohany sy ny fihetseham-po mba hifandray amim-pahombiazana ny olona iray hafa. Ny tena zava-misy izao tontolo izao, isika ihany koa ny mahazo fanampiana amin’ny alalan’ny fihetsika sy ny masontsika isika rehefa te-hampita ny hafatra. Ny olona izay daty aterineto, na izany aza, dia tsy voafetra ho — tsoratra sy am-bava ny fifandraisana. Manana ny teknolojia izy ireo ary atao ihany koa ny mampiasa io teknolojia mba hahita ny tsara ny teny milaza fa alohan’ny afaka mampiasa ireo teny mba hifandray amim-pahombiazana ny olon-kafa, dia tsy maintsy aloha ho azo antoka fa ny teny ihany koa ireo tsy manana ahiahy mifandray ny saina sy ny fihetseham-po. Rehefa azo antoka ny fifandraisana eo ny teny sy ny saina sy ny fihetseham-po dia midika hoe maneho inona ny hevitrao sy ny mahatsapa ny marina. Manao ny marina, rehefa avy rehetra, dia singa manan-danja indrindra ny fifandraisana mahomby. Azonao atao ny mampiasa raitra teny na tsotra ireo dia mety endrika sarotra sazy na mahafinaritra ny tononkalo dia mety ho tena manan-talenta milaza i wordsmith.
Tsy misy marina, na dia izany aza, ny teny dia mbola ho foana ny heviny
Marina ny fanehoan-kevitra, noho izany, midika hoe fifandraisana mahomby. Dia tsy mbola tapa-kevitra momba ny fihetseham-po ho an’ny vehivavy ianao no miresaka amin’ny aterineto, ary dia tsy mbola vonona ho amin’ny daty azy ihany? Aoka hahafantatra izay ny toe-draharaha noho izany izy dia tsy manana fanantenana fa ho ho afaka hihaona sy izay, kosa, dia mety hanimba tanteraka ny vintana ny trandrahana ny fihetseham-po ho azy bebe kokoa tokony taty aoriana dia tonga saina fa izany no zavatra tianao hatao. Moa ve ianao manana fikasana ny mandao ny firenena sy ny hifindra any hafa indray mba ho miaraka amin’ny mpiara-miasa? Raha tsy t, ataovy azo antoka izay mety ho mpiara-miasa hihaona online mahatakatra izany hatrany am-boalohany ka samy ho fantatrareo tany am-boalohany ampy raha izany no zavatra izay mbola azo niasa avy, na raha toa ka misy ny fifanarahana-mpandika. Moa ve ianao manana adidy ara-bola fa tsy manantena ny ho avy mpiara-miasa mba hanampy anao? Ny marina momba ny zavatra ilaina izany dia tsy manome na iza na iza ny fahatsapana fa ianao dia afaka manolotra tsy manam-petra ny fiarovana ara-bola. Rehefa dinihina tokoa, raha ianao ihany koa ny fitiavana sy ny fanoloran-tena ny tolotra sy ianao hihaona ny vehivavy izay afaka manome anao izany ihany, dia manampy ny tsirairay avy dia ho a nanome. Ny fanaovana ny marina hatrany am-boalohany no hamaritra raha misy fifandraisana mendrika nanenjika. Avy eto an avy, ny fifandraisana mahomby amin’ny tsirairay dia mazava ho azy manaraka. Tsy mifandray na tsy mifandray amim-pahombiazana izany dia matetika ny antony mahatonga ny fifandraisana tsy, ny sasany aza vao manomboka. Amin’ny fiarahana amin’ny aterineto, ny fifandraisana mahomby dia zava-dehibe kokoa noho ny hany fifandraisana ny olona roa dia tsy maintsy ary izay izy ireo dia afaka manorina fifandraisana izay afaka ihany koa izy ireo hanaraka ny tena izao tontolo izao dia ny fifandraisana an-tserasera. Indrindra fa raha olona iray no ampiasaina kokoa sy mahazo aina izay maneho ny tenany amin ny fifandraisana ara-batana sy ny fihetsika, ny fifandraisana amin’ny alalan’ny teny mety ho sarotra sy mavesatra mihitsy aza. Fa raha mbola misy marina momba ny fihetseham-po, avy eo ny teny dia tokony ho tonga mora. Fifandraisana, na izany aza, dia roa-dalana eny an-dalana iray dia tsy maintsy tsy mahalala afa-tsy ny fomba hanehoany ny tenany tenany amin’ny fomba mahomby, fa koa hoe ahoana no fomba fihainoana. Mampihomehy moa, ny mahagaga ny fivoarana ara-teknolojia fifandraisana tsy nanao na inona na inona mora kokoa ho an’ny olona mba hifandray tsara amin’ny tsirairay, indrindra fa izay fifandraisana no resahina.
Ny fiarahana amin’ny aterineto dia tena ohatra tsara
Fiarahana tranonkala mamela ny olona rehetra manerana izao tontolo izao mba hihaona sy hampivelatra ny fifandraisana sy ny isan-karazany sy ny tena mety hafatra fitaovana azo jerena an-tserasera ho mifandray amin’izy samy izy toy ny mora toy ny manindry bokotra iray. Fa ny fifandraisana mbola tsy na dia eo aza ireo nanampy ara-teknolojia tombony. Ireo fandrosoana, mazava ho azy, afa-tsy hanome antsika amin’ny tsara sy mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any fitaovana mba hijanona mifandray nefa dia mbola miakatra ho antsika mba hanorina fifandraisana manokana amin’ny olona iray hafa amin’ny alalan’ny fifandraisana mahomby. Ireo miavaka fitaovana ireo bebe kokoa tahaka ny fanitarana ny rantsan-tanana sy ny feo chords mbola tsy maintsy mampiasa ny lohany sy ny fihetseham-po mba hifandray amim-pahombiazana ny olona iray hafa. Ny tena zava-misy izao tontolo izao, isika ihany koa ny mahazo fanampiana amin’ny alalan’ny fihetsika sy ny masontsika isika rehefa te-hampita ny hafatra. Ny olona izay daty aterineto, na izany aza, dia tsy voafetra ho an-tsoratra sy am-bava ny fifandraisana. Manana ny teknolojia izy ireo ary atao ihany koa ny mampiasa io teknolojia mba hahita ny tsara ny teny milaza fa alohan’ny azonao atao ny mampiasa ireo teny mba hifandray amim-pahombiazana ny olon-kafa, dia tsy maintsy aloha ho azo antoka fa ny teny ihany koa ireo tsy manana ahiahy mifandray ny saina sy ny fihetseham-po. Rehefa azo antoka ny fifandraisana eo ny teny sy ny saina sy ny fihetseham-po dia midika hoe maneho inona ny hevitrao sy ny mahatsapa ny marina. Manao ny marina, rehefa avy rehetra, dia singa manan-danja indrindra ny fifandraisana mahomby. Azonao atao ny mampiasa raitra teny na tsotra ireo dia mety endrika sarotra sazy na mahafinaritra ny tononkalo dia mety ho tena manan-talenta milaza i wordsmith.
Marina ny fanehoan-kevitra, noho izany, midika hoe fifandraisana mahomby. Dia tsy mbola tapa-kevitra momba ny fihetseham-po ho an’ny vehivavy ianao no miresaka amin’ny aterineto, ary dia tsy mbola vonona ho amin’ny daty azy ihany? Aoka hahafantatra izay ny toe-draharaha noho izany izy dia tsy manana fanantenana fa ho afaka hihaona sy izay, kosa, dia mety hanimba tanteraka ny vintana ny trandrahana ny fihetseham-po ho azy bebe kokoa tokony taty aoriana tonga saina fa izany no zavatra tianao hatao. Moa ve ianao manana fikasana ny mandao ny firenena sy ny hifindra any hafa indray mba ho miaraka amin’ny mpiara-miasa? Raha tsy t, ataovy azo antoka izay mety ho mpiara-miasa hihaona online mahatakatra izany hatrany am-boalohany ka samy ho fantatrareo tany am-boalohany ampy raha izany no zavatra izay mbola azo niasa avy, na raha toa ka misy ny fifanarahana-mpandika. Moa ve ianao manana adidy ara-bola fa tsy manantena ny ho avy mpiara-miasa mba hanampy anao? Ny marina momba ny zavatra ilaina izany dia tsy manome na iza na iza ny fahatsapana fa ianao dia afaka manolotra tsy manam-petra ny fiarovana ara-bola. Rehefa dinihina tokoa, raha ianao ihany koa ny fitiavana sy ny fanoloran-tena ny tolotra sy ianao hihaona ny vehivavy izay afaka manome anao izany ihany, dia manampy ny tsirairay avy dia ho a nanome. Ny fanaovana ny marina hatrany am-boalohany no hamaritra raha misy fifandraisana mendrika nanenjika. Avy eto an avy, ny fifandraisana mahomby amin’ny tsirairay dia mazava ho azy manaraka
← Hanatevin-daharana ny fiarahana amin'ny chat ny fiarahana amin'ny aterineto hiresaka amin'ny rosiana ny vehivavy ny fanambadiana